(Codeyn):-Xildhibaanada iyo Senatarada ka Soo jeeda Beesha Biimaal Oo Codqaadidooda ka Socoto Baraha Bulshada – hareerley
(Codeyn):-Xildhibaanada iyo Senatarada ka Soo jeeda Beesha Biimaal Oo Codqaadidooda ka Socoto Baraha Bulshada
Waxaa ka Biloowdey baraha bulshada Codeyn loogu Sameynayo Xildhibaanada iyo Senatarada ka soo jeeda Beesha Biimaal waana idiin soo gudbin doonaa marwalba iyo Xildhibaa kasta Oo la soo dhigo iyo in Uu Ogaado heerka Uu ka Taagan yahay dhanka Beesha .
Waxaa hadda ay ku Socotaa Xildhibaan beesha ka mid ah Oo doonaya in uu tartamo 2020 kaas Oo lagu Magacaabo Maxamuud Sheekh Maaxi (Ceynsame ) kaas oo la Agdhigey senata Nadiir Maxamuud ayaa ilaa iyo hatan heysta 71 Senatar Nadiir ayaa waxa uu heley 30 weli wey Socotaa Codeynta.
Waa Arin wanaagsan waana Soo dhaweyneynaa waxaana Soomalida kale Fari lahaa iyaga ruuxooda in sidaan oo kale ay ka bilaabaan Baraha Bulshada si loo Ogeysiiyo halka ay ka Taagan yihiin Bulshada ay ku Matalaan kuraasta Oo ay Danahooda ka Raacdeen.
Baarlamaanka Soomaliya iyo Madaxweynaha ayaa ku haminaaya in ay waqtiga ku darsadaan iyadoo Shacabka Soomaliyeed aananba waxba la iska weydiinin.
Hadaba Shacabka ayaa wanaagsan in Codeyntooda la Badiyo waa kuwa Kuraasta idiinku Fadhiya waaba kuwa Fashilmey horey ayaanu u Ogeyn laakiinse hala Daawadsiiyo si ay ugu Quustaan Barta Bulshada ayaa ah Meesha kaliya amaba Awooda Shacabka u Harey Oo ay ka sheegi karaan Fikradahooda Shacabka ayaa Awooda iskaleh.
← (Daawo):-Xogta Dahsoon: Todoba Jeer oo ay u dhoweyd in Hitler la dilo
Hooyo doonaysa in loo naxariisto nin shan carruur ah ka dilay →